बैंकिङ खबर । ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) विच विदेशम अध्ययन गर्नजाने विद्यार्थीका लागि शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा सम्झौता भएको छ । संघको बार्षिक साधारणसभाले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई संघको आधिकारीक बैंक बनाउर्ने निर्णय गरेको थियो । …
बैंकिङ खबर । सिर्जना फाईनान्सले अध्यक्षमा सुयश प्याकुरेललाई निरन्तरता दिने भएको छ । फाइनान्सको अठारौंं बार्षिक सधारण सभाबाट निर्वाचित सञ्चालक समितिको प्रथम बैठकले अध्यक्षमा सुयश प्याकुरेललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैक, बिराटनगरका निर्देशक बिनोदराज आचार्यले अध्यक्ष …
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको दुई नयाँ शाखा विस्तार
बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कैलाली जिल्लाको धनगढी उप महानगरपालिका वडा न. ७ धनगढी स्थित क्याम्पसचोक र कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका वडा न. ६ बराहीचोक स्थित लेकसाईडमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । हाल बैंकले ७४ जिल्लामा २१२ वटा …
सिन्धु विकास बैंकको नवौं साधारण सभा सम्पन्न
बैंकिङ खबर । सिन्धु विकास बैंकले नवौं बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । बेंकले आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ को बार्षिक प्रतिवेदन लगाएतका प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । यसै साधारण सभाबाट बैंकको संस्थापक सेयरधनी समुहकोबाट संचालकहरुमा राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, श्रीमती निभा …
नौ वटा बाणिज्य बैंकले सेयर ब्रोकर लाइसेन्स लिने
बैंकिङ खबर। सेयर बजार सुधारका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने चर्चा नयाँ होइन् । तर पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र वोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेपछि केहि बैंकहरुले साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव लगेका हुन् । अहिलेसम्म साधारणसभा गर्ने १५ बैंक मध्ये ७ …
बैंकिङ खबर । माछापुच्छ्रे बैंकले टाइम्स रेमीट र ए.एम.भी. टेलकम्पनीसाग सम्झौता गरेको छ । बैंकले बैंकका ग्राहकहरुका साथै सर्वसाधारणका लागि सुविधा स्वरुप रेमिटएप मोबाइल वालेट सेवा सम्बन्धी त्रि–पक्षीय सम्झौता गरेको हो । सम्झौतापत्रमा माछापुच्छ्रे बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन …
पाउलान त वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले ऋण ?
बैंकिङ खबर। सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई १० लाख सम्म सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने भएपछि २० हजार बढि युवाले २० अर्ब बढि ऋण माग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार करिब २१ हजार युवाले प्रत्यक्ष र अनलाइनमार्फत आवेदन …
पैसा फिर्ता गराउने अदालतको आदेशले बैंकलाई सास्ती
बैंकिङ खबर। व्यवसायी अजयराज सुमार्गीले बैंक खाताबाट झिकेको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ। पुष १० गते अदालतले सुमार्गीको बैंकमा रोकिएको रकम झिक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यस लगत्तै …
वैदेशिक रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारीमा मेगा बैंक
बैंकिङ खबर । मेगा बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई ७.८५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकको बार्षिक साधारण सभाले सेयरधनीलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको ६.८५ प्रतिशतले हुन आउने ७० करोड ४५ लाख ५८ हजार ५ सय …
बैंकिङ खबर। नेपालमा भारु नयाँ नोट प्रतिबन्ध हुँदा सीमा क्षेत्रमा कारोबार गर्नेहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। भारतमा आउजाउ गर्नेहरु र त्यहाँ रोजगारीमा जानेहरुलाई उत्तिकै समस्या छ। सर्वसाधारणलाई मात्रै होइन, यसले नेपाल सरकारको वित्तीय कारोबारलाई समेत नराम्रो असर पारेको छ। नेपाल …
पश्चिम रुकुममा कुमारी बैंकको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
बैंकिङ खबर। कुमारी बैंकले रुकुमका विभिन्न स्थानीय तहमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सुरुगरेसँगै वित्तीय साक्षरता सम्बन्धि कार्यक्रमहरु समेत गरेको छ । पश्चिम रुकुमको मुसीकोट स्थित बालकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरेको हो । बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव गिरीले …
जनता बैंकको एकैसाथ ७ वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यलय संचालन
बैंकिङ खबर । जनता बैंकले ७ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ । प्रदेश १ को बिराटनगरको ट्रफिक चोक, प्रदेश २ को जनकपुरको भानु चोकमा, प्रदेश ३ को हेटौडाको स्कूल रोडमा, गण्डकी प्रदेशको पोखराको न्यूरोडमा, प्रदेश ५ को बुटवलको …
बैंकिङ खबर । हिमालयन बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई १५.७८९५ प्रतिशत लाभाश वितरण गर्ने भएको छ । बैंकको छब्बीसौं वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर र १०.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो । बोनस सेयर वितरण पश्चात बैंकको …
बैंकिङ खबर । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले आफ्ना सेयरधनीलाई ५.२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंकको बाह्रौ वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ३.६ प्रतिशत बोनस शेयर र १.६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित …
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ९.४५ प्रतिशत लाभांश पारित
बैंकिङ खबर । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई ९.४५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंककोे १४औ बार्षिक साधारणसभाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत आर्थिक बर्ष०७४/७५ को खुद मुनाफाबाट चुक्ता पूंजीको ४ प्रतिशत बराबरको बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि …